ညဥ့်နက်စနစ် Pixel ၏ Night Sight မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကို Google ကရှင်းပြသည် Androidsis
Google Pixel ၏ "Night Sight" ၏မယုံနိုင်လောက်အောင်ညပုံစံ
El Google Pixel ၏ Night Sight Mode, ဒါမှမဟုတ် Night Mode ဂူးဂဲလ်ကင်မရာသည်ယခုအချိန်တွင်တန်ဖိုးအရှိဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာရန်အတွက်အများပြည်သူ၏လက်ခုပ်သံများကိုခြေလျင်လျှောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ကိုရယူရန်နည်းလမ်းများရှိသော်လည်း Pixels များအတွက်သီးသန့်ဖြစ်သောထူးခြားသောသွင်ပြင်လက္ခဏာများ အချို့ဖုန်းများအတွက်.
လွန်ခဲ့သောနာရီအနည်းငယ်က Google သည်ရှင်းပြရန်အချိန်ယူခဲ့သည် "Night Sight" ၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောညအိပ်မက်လည်ပုံ Google Pixel ၏။ အလင်းအခြေအနေသည်အတိအကျမသင့်လျော်သောအချိန်တွင်သင်ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်ခွင့်ပြုသည့် mode ။ လာမည့်နေ့များ၌ Pixel မျိုးဆက်သုံးဆက်သို့ရောက်ရှိနိုင်မည့် mode တစ်ခု။
2 Night Mode သို့မဟုတ် Pixel ၏ Night Sight မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်
Google Pixel3တင်ဆက်မှုတွင် ကြီးမားတဲ့, G ကြောင်းညဉ့် mode ကိုဝါကြွား es Flash ကိုအသုံးမပြုဘဲအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဓာတ်ပုံများကိုရိုက်ကူးနိုင်သည်။ သူက Apple ဖုန်းအသစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ရာတွင်ဥပမာတစ်ခုပေးခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောဖုန်းတစ်လုံးကိုယူခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပြီးပြည့်စုံသောစကားစုတစ်ခုကနှိုင်းယှဉ်မှုသည်နေ့နှင့်ညကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
ဂူဂဲလ်ကသူ၏ဘလော့ဂ်တွင်ဓာတ်ပုံကောင်းတစ်ခု၏သော့သည်အမြဲတမ်းအလင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုရှင်းပြသည်။ မှောင်မိုက်လာတဲ့အခါ ကင်မရာများသည်ဤအလင်းမရှိခြင်းအတွက်လျော်ကြေးပေးသည် အလင်းပိုမိုဖမ်းယူနိုင်ခြင်း၊ ဆိုလိုတာကအဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာကျွန်တော်တို့ဟာစပါးနှင့်ဆူညံသံတွေအများကြီးမြင်နေရတယ်။
အချိန်ကြာမြင့်စွာ, ညဓါတ်ပုံတွေကိုယူကြောင်းအလိုဆန္ဒအတွက်ကူညီရန် Flash သည်အကောင်းဆုံးဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်သည်ဒါကြောင့်မြင်ကွင်းတစ်ခုမှအလင်းဖြည့်စွက်အဖြစ်။ ဓာတ်ပုံထဲတွင်နေရာချသူများသို့မဟုတ်နေရာများစွာတွင် Flash ကိုခွင့်မပြုပါက၎င်း၏အားနည်းချက်များရှိသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာ။ မီးပွားသည်အဓိကအကြောင်းအရာများကိုသာအလင်းပေးသည်ဟုပြောပြီးပတ်ဝန်းကျင်သို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုများကိုညစာ၏အဓိကအာရုံစိုက်ရာမှဝေးကွာစေသည်။
Google tripod တွေအကြောင်းလည်းပြောထားတယ်, အရာ, ကင်မရာတည်ငြိမ်ခြင်းအားဖြင့်ငါတို့ဓာတ်ပုံများအတွက်ပိုမိုမှောင်မိုက်အခြေအနေများအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုပြီးအလင်းရိုက်ကူးဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ညဘက်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ဖို့ဒီကားကိုဘယ်သူကသယ်ဆောင်နေတာလဲ။ နောက်ထပ်အားနည်းချက်တစ်ခုမှာကြာချိန်ကိုဖမ်းယူသည့်အခါမြင်ကွင်းရှိအရာဝတ္ထုများ၏ရွေ့လျားမှုကိုမှုန်ဝါးစေနိုင်သည်။
Night Mode သို့မဟုတ် Pixel ၏ Night Sight မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်
Pixel's Night Sight mode သည်သင်ရှပ်တာခလုတ်ကိုနှိပ်သောအခါ၎င်းကိုဂရုစိုက်လိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည် သဘာဝလက်လှုပ်ရှားမှုကိုတိုင်းတာသည် မြင်ကွင်းတွင်လှုပ်ရှားမှုမည်မျှရှိသည်ကို (အနည်းငယ်လှုပ်ခါလေ့ရှိသည်) ။
Pixel တည်ငြိမ်ပြီးမြင်ကွင်းသည်ငြိမ်နေပါက Night Sight အလင်းကိုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အချိန်ယူရလိမ့်မယ် ဖမ်းယူအတွက်ဆူညံသံပမာဏ။ Pixel သည်ရွေ့လျားနေပါကသို့မဟုတ်အရိပ်အမြွက်တစ်ခုတွင်လှုပ်ရှားမှုအရိပ်အမြွက်တစ်ခုရှိပါက Night Sight သည်ပိုမိုတိုတောင်းသောထိတွေ့မှုကို အသုံးပြု၍ လှုပ်ရှားမှုမှုန်ဝါးမှုကိုလျှော့ချရန်အလင်းရောင်နည်းသွားသည်။
မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်မဆိုမြင်ကွင်းရှိအကြောင်းအရာသည်ရွေ့လျားနေပါကဤညအမြင်အာရုံသည်အလိုရှိသည် ပျက်စီးခြင်းမှအနည်းငယ်သောလှုပ်ရှားမှုကိုကာကွယ်တားဆီးနိုင်သည် ဖမ်းယူခြင်း။ အာရုံစူးစိုက်မှုမရှိ။ အလွန်တောက်ပသောဓာတ်ပုံကိုရိုက်ကူးမည့်အစား Night SIght သည်မှောင်မိုက်သော်လည်းအလွန်ချွန်ထက်သောဆက်တိုက်ရိုက်ချက်များအတွက်အလင်းတူညီသောပမာဏကိုဖမ်းယူသည်။
နောက်တစ်ဆင့်မှာ Night Sight ကိုပေါင်းစပ်ရန်ဖြစ်သည် အားလုံးမှော်ပြုပါနှင့်မျှမမှုန်ဝါးပေါ်လာသည် လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဖမ်းယူအတွက်တောက်ပ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အလင်းအများကြီးရပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိသည့်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရလိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဂူဂဲလ်မှအလင်းနည်းသောအခြေအနေများတွင်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရိုက်သောအခါယနေ့ညတွင်အသုံးပြုသည်။ တစ် ဦး ကနည်းပညာ ဆော့ဖ်ဝဲအားဖြင့်လုံးဝတတ်၏ နှင့်အဘယျသို့ကဆက်ပြောသည်ဖြစ်ပါတယ် သူတို့အားအသစ်သောအားသာချက်များရန် Google Pixel ကင်မရာအက်ပ်နှင့်အခြားအရာများ ကျနော်တို့ပြီးသားထိုအချိန်ကမိန့်မြွက်တော်မူ၏.
ဒါကြောင့်သင်ပြီးသားကိုငါသိ၏ Google Pixel ၏ညအမှောင်စနစ်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သောဓါတ်ပုံများရိုက်ရန်၎င်းမည်သို့အားသာချက်ယူရမည်နည်း။ အခုမိုဘိုင်းဖုန်းကနေဓာတ်ပုံဘုရင့်ဘုရင်ဘယ်သူလဲဆိုတာရှင်းနေပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Google Pixel ၏ "Night Sight" ၏မယုံနိုင်လောက်အောင်ညပုံစံ